La kulan – Ninkii naafadda ahaa ee beeray 17,000 geedo ah! | Radio Himilo
Home / Habka-Nolosha / La kulan – Ninkii naafadda ahaa ee beeray 17,000 geedo ah!
La kulan – Ninkii naafadda ahaa ee beeray 17,000 geedo ah!
Posted by: Mahad Mohamed July 1, 2020
Himilo – Ma Sanxiao, oo ah 70 jir lugey howl-gab hore oo ciidamada Shiinaha katirsan ah, kuna nool Jingjxing, waqooyiga Shiinaha, wuxuu 19-kii sanno ee lasoo dhaafay noloshii ku soo qaatay dhir-beerista – isaga oo ku guuleystay inuu sameeyo keyn yar oo xaafaddiisa ku dhagan.
Ma waxaa laga helay in dhiigiisu sumeysan yahay sannadkii 1974-kii isaga oo katirsan ciidamada Shiinaha. Xaaladiisu way sii xumaatay markii uu waayay labadiisa lugood laba xilli oo kala fog. Kaddib helidda daryeel caafimaad iyo la-tacaalis joogto ah, wuxuu awooday inuu reerkiisa masruuf u raadsado. Balse iyada oo la fiirinayo cuuryaannimadiisa, waxaa ku adkeyd inuu helo shaqo. Gunnada yar ee kaga imaanaysay aayamaalka dowladda ay siiso ciidamadeeda howlgabka noqday, kuma fileyn inay kaafiso nolosha reerkiisa. Hayeeshe marnaba ma qaadan inuu iska noolaado.
Sannadkii 2000, si kastaba, isaga oo daawanaya muuqaalka sheekada nin dhir-beere ah, Ma wuxuu tallaabadaas ka dhex arkay fursad. Wuxuuna – isaga oo ku raja-weyn inuu lacag ka sameeyo beerista dhirta – bilaabay inuu duleedka xaafaddiisa ka bilaabo abuurka dhirta.
“Xaqiiqdii markii hore hadafkaygu wuxuu ahaa inaan dhir-beerista ka sameeyo lacag aan reerkayga ku maareeyo,” ayuu yiri Ma isaga oo la hadlayay China Daily. “Balse markii ay kobceen waxaan daawaday quruxdooda, iyo faa’iidada ay degaanka u leeyihiin.”
Markii uu indhihiisa ku arkay sida geedaha qaar ay usoo kobcayaan, qaarna ay ugu le’anayaan cimilada kulul iyo abaaraha, Ma wuxuu go’aansaday inuusan mar danbe geed iibinin. Wuxuu taniyo markaas u beeri jiray si ay uga faa’iidaan inta kale.
“Ma doonayo inaan geed danbe iska iibiyo. Waxaan rabaa inaan dhaxal uga tago jiilka soo aadan iyo dhulkayga,” ayuu yiri. “Waxaana ku taagnaan doonaa ilaa iyo inta naftu igu baaqi tahay.”
Sidaas oo ay tahay, Ma wuxuu subax walba u kacaa dhinacaas iyo keymaha si uu daryeelkooda u ilaaliyo. Mana cuno quraacda aroorta hore. Sidashada qalabka dhir-beerista, Ma wuxuu maalin walba qodaa god cusub si uu ugu rido abuur cusub oo maalmo kaddib soo dhasha. Ma ahan shaqo sahlan. Waxaana dhacda in mararka qaar ay xanuun badan ku tahay Ma naftiisa.
“Xanuunka iga soo gaara dhir-beerista maba dareemo,” ayuu yiri. “Waxaan ahaa askari. Waxaase taas iiga sii daran heli waaga qalab cusub si aan isaga beddelo kuwii hore aan u adeegsan jiray.”
Markii ay xukuumadda Shiinaha ay fahamtay halgankiisa, waxay u fidisay kaalmo maaliyadeed oo degdeg ah, balse Ma wuxuu ku faraxsan yahay inuusan meel qabyo ah uga soo harin halgankiisa.
Inta la qiyaasi karo, Ma wuxuu beeray 17,000 oo geed sannadihii lasoo dhaafay oo dhan, in kasta oo ehelkiisa ay in badan kula taliyaan inuu waqtigiisa qeyb kamid ah guriga kula qaato, haddana Ma wuxuu jecleystaa inuu la noolaado miraha juhdigiisa.
“Aniga ahaan, uma arko geedo, waxaan u arkaa askar aan digtooni geliyay,” ayuu yiri. “Inta aan noolahay, waxaan rabaa inaan u huro naftayda.”
Previous: Barcelona oo aan fasaxi doonin Quique Setien
Next: Mafi Dova – Xaafad in lagu dhalo ay danbi tahay!